What is the EGS Demand Supply Forecasting application?
EGS ဝယ်လိုအား ရောင်းလိုအား ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့် အက်ပလီကေးရှင်းဆိုတာ ဘာလဲ
Seed value chain operations include plant genetic resource management, variety development, EGS production (breeder, foundation, registered seed), certified seed production, seed dissemination and finally, seed use by farmers. Farmers using the seed as input for grain production are driving the seed value chain. The operators in the value chain are supported by service providers. Seed value chain services include seed quality assurance, credit for seed producers and seed extension. Seed operators and service providers work inaspecific context or enabling environment. Still now the information flow and the course of action decided byamassive paper trail, that many times makes the system slow moving during the peak seasons.
သီးနှံ၏ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မျိုးကွဲများ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အခြေခံမျိုးစေ့ အဆင့်များ ထုတ်လုပ်ရေး (မိဘမျိုးစေ့၊ ဆင့်ပွားမျိုးစေ့၊ မျိုးသန့်မျိုးပွားမျိုးစေ့)၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးပွားမျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် မျိုးသန့်စိုက် တောင်သူများ ရရှိ စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းတွေဟာ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် လုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကွင်းဆက်မှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတွေကို နည်းပညာအ ရသော် လည်းကောင်း ထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးရပါ မယ်။ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ဆိုရင် အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများအတွက် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမျာနှင့် မျိုးစေ့ပြန့်ပွားမှုများပါဝင်ပါသည်။ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထောက်ပံ့သူများသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင် နိုင်သော တိကျသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ရှိသင့်သည်။ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့်မှာ စာရွက်စာတမ်း ဖြင့် အဆင့်ဆင့် သွားနေ ရသည်များကြောင့် လုပ်ငန်း ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေပြီး အဓိက စပါး မျိုးစေ့ထုတ်မှု အများဆုံး ရာသီတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
The basic operations is the seed production and generation system maintenance (BSàFSàRSàCSà) and who controls what. In the Delta region, the DoA office that is primarily responsible, is the Regional DoA office, headed by the Regional Director and assisted by the Regional Seed Division team. The BS and FS are predominantly produced in the DAR Yezin farms and distributed to the DOA seed Farms. In this region there are5DOA seed farms and 1 DAR seed farm producing RS for the Seed Growers/Companies and FS for themselves.
အခြေခံ လုပ်ငန်းဆောင်တာသည် မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း စနစ်များကို ကျင့်သုံးပြီး စီမံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ တိုင်းမျိုးစေ့ ဌာန ပါဝင်သည့် တိုင်းစိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးရုံးသည် စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသောဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ BS မျိုးစေ့အဆင့်နဲ့ FS မျိုးစေ့အဆင့်များကို စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ရေဆင်းမှသာ အဓိက ထုတ်လုပ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ မျိုးစေ့ထုတ်ခြံများအား ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။
The System has3sections
This system is the result of almostayear of data acquisition, coding, testing and now its ready for deployment
This app was developed and coded by Global New Wave Technologies
Abishkar and Arnab....in May 2018 working on the first draft of the algorithms